डाक्टरले गर्भको बच्चाको तर्फबाट बुवालाई लेखिदिने चिठी – ekarnalikhabar
११ बैशाख २०७८, शनिबार ०१:५४
सुर्खेत पाँच वर्षअघिको कुरा हो। वीरेन्द्रनगरकी एक गर्भवती महिला कर्णाली प्रदेश अस्पताल, सुर्खेतमा जँचाउन आएकी थिइन्।उनी बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीको कार्यक्षमा पुगिन्। डा. केसीले ती महिलाको घाँटीमा चोट लागेको देखिहाले।
अरू जाँचपछि उनले घाँटीको चोटबारे सोधे। महिला केही बोलिनन्।डा. केसीले लत्तो छोडेनन्। घरी के भने, घरी के। तर उनलाई घाँटीको चोट कसरी लाग्यो भनेर सोधिरहे।अन्तिममा महिलाले भनिन्, ‘बुढाले पिटेर।’
डा. केसी ती महिलाको निन्याउरो अनुहार अहिले पनि सम्झिन्छन्।’उहाँ डराउनुभएको थियो। निराश अनुहार लगाएर उहाँले अरू पनि कुरा गर्नुभयो,’ डा. केसीले सेतोपाटीसँग भने।
त्यो दिन ती महिलाका कुरा सुनेर उनले यसको समाधानको पाइला चाले। उनले आफ्नो टेबलको छेउबाट एउटा खाली कागज निकाले र केही लेखेर खाममा राखे। अनि ‘आफ्नो श्रीमानलाई दिनू’ भनेर ती महिलालाई दिए।घर पुगेर उनले श्रीमानलाई त्यो चिठी दिइन्। चिठी पढिसकेपछि उनका श्रीमानले च्यातेर आगोमा फालिदिए।
तर दिनकै रक्सी खाएर आउने श्रीमान भोलिपल्ट बेलुका नमाती घर आए। खाना पकाउन सुरसार गरेकी श्रीमतीलाई भने, ‘छोड, मै पकाउँछु। आराम गर।’छक्क पर्दै उनी बसेर श्रीमानले पकाएको हेरिन्। उनले पकाएको खाइन्। त्यसभन्दा बढी छक्क उनी श्रीमानले आफ्ना लुगा पनि धोइदिएको देखेर परिछन्।
उनको मनमा यो प्रश्न धेरै दिन खेल्यो। अनि अर्कोपटक डा. केसीकहाँ जाँदा उनले सोधिन्, ‘डाक्टर साहेब, खासमा त्यो चिठीमा तपाईंले के लेख्नुभएको थियो?’डा. केसीले आफूले पठाएको चिठीमा लेखिएको कुरा सुनाए।खासमा त्यो चिठी डा. केसीले आफ्नो तर्फबाट लेखेका थिएनन्, आफ्ना हातले ती महिलाको पेटमा भएको बच्चाको तर्फबाट लेखिदिएका थिए। बच्चाले आफ्नो बाबालाई लेखेको चिठी!
‘प्रिय बुवा, म अहिले आमाको पेटभित्र खेलिरहेको छु। सुरक्षित छु। यहाँ खेल्ने ठाउँ पनि थुप्रै छ। म बाहिर आएर, तपाईंको हात समातेर स्कुल जान आतुर छु। तपाईंको काखमा खेल्न आतुर छु। तर, बेलुकापख मलाई कसैले मेरो घाँटी च्यापेको जस्तो लाग्छ। कसैले मलाई मार्दिन खोजेको जस्तो लाग्छ। मेरो बुवा हुँदाहुँदै मेरो आमाको वरिपरि कसले यस्तो गरेको होला र? मलाई त यस्तो कुरामा विश्वास लाग्दैन। मेरो आमाको सुरक्षा हजुरले गरिदिनुहोला है। किनभने उहाँकै पेट मेरो घर हो।’
‘हिंसामा परेका बिरामीलाई कसरी सहयोग गर्ने होला भन्ने लागिरहन्थ्यो। सकेसम्म सहयोग-सल्लाह दिन्थेँ,’ उनले भने, ‘तर त्यो तालिमको प्रशिक्षक भइसकेपछि मैले चिठीको यो कुरा थाहा पाएँ। यसले हिंसा रोक्न सकिन्छ भन्ने अनुभव पनि गर्न पाएँ।’
‘मेरो बाबालाई चिठी’ को नमूना
यो तालिम बच्चा जन्मिएदेखि पाँच वर्षको हुँदासम्म कसरी स्याहार-सुसार गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन्छ। समुदायस्तरीय कार्यक्रमभित्र ‘मेरो बाबालाई चिठी’ पनि पर्छ।
‘बच्चा नजन्मिँदै, गर्भमै कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा सिकाउने यो कार्यक्रमको फाइदा हो,’ डा. केसीले भने।
‘यो कार्यक्रमको भूमिका हेर्दा सानोतिनो लाग्छ तर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको छ,’ डा. केसीले भने, ‘गर्भवतीमाथि हुने हिंसा रोक्न यो चिठीले धेरै काम गर्छ। मैले नै धेरै देखेको छु।’
पहिलो, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत समुदाय परिचालन निर्देशिकामा ‘मेरो बाबालाई चिठी’ को नमूना छ। यो नमूनामा गर्भवती आमाका आवश्यकता पूर्ति, आफूलाई कसरी गर्भभित्र स्याहार-सुसार गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ। यो खालको चिठी सामान्य अवस्थामा पठाइन्छ।
‘जो पुरूष गर्भवतीमाथि हिंसा गर्छ वा लागुपदार्थ दुर्व्यसनीमा फसेको छ, उसको बच्चा पृथ्वीमा आउँदै छ। सोही गर्भमा रहेको बच्चाको तर्फबाट मेरो आमालाई कसैले दुर्व्यवहार गर्‍यो भने मलाई भित्र असर पर्छ, म मर्न पनि सक्छु है भनेर भावुक रूपमा पत्र लेखिदियो भने धेरै बुवा परिवर्तन हुन्छन्,’ डा. केसीले भने।
यो चिठी दिँदा यदि श्रीमान सँगै आएका छन् भने स्वास्थ्यकर्मीले उत्साहित हुँदै ‘तपाईंलाई यो चिठी आएको छ नि!’ भनेर दिन्छन्।
‘एउटा चिठीले समाजका आपराधिक गतिविधि कम हुन्छन् र बच्चाहरूको सफलताको आधार बन्छ भने यो पद्धति कार्यान्वयन गर्न कसैले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन,’ बालरोग विशेषज्ञ डा. केसी भन्छन्, ‘यो अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी र संस्थाले गरेका छैनन्। यसमा सबैले ध्यान दिनु जरूरी छ।’by-setopati